Anaemia - Ihe mgbaàmà ndị ọzọ ị ga-ama | Bezzia
Susana godoy | 14/05/2022 14:00 | Ọrịa
Ọ bụ eziokwu na mgbe anyị chere maka anaemia anyị na-ejikọta ya na ike ọgwụgwụ ma ọ bụ ike ọgwụgwụ. Ma n'ezie ị maara na e nwere usoro mgbaàmà ọzọ anyị ga-eburu n'uche. Ya mere, ọ dịghị ihe dị ka ịdepụta ha, n'ihi na ma eleghị anya, ha adịghị adịkarị, ma n'agbanyeghị nke ahụ, anyị aghaghị iburu ha n'uche tupu anyị atụ egwu na-eche ihe ndị ọzọ.
Anaemia bụ otu n'ime ọrịa ọbara a na-ahụkarị, nke mkpụrụ ndụ ọbara uhie na-ezughị ezu ibu oxygen. N'ihi ya, ike ọgwụgwụ bụ otu n'ime mgbaàmà mbụ anyị na-eburu n'uche. Ma e nwere ndị ọzọ na n'ezie na ha dịkwa mkpa. Chọpụta ihe niile ị kwesịrị iburu n'uche!
1 Akpụkpọ ahụ na-achagharị agbacha karịa ka ọ dị na mbụ
2 Ịchọ ice nwere ike ịbụ ihe mgbaàmà nke anaemia
3 Ọrịa ụkwụ na-adịghị ezu ike
4 Mgbagwoju anya ma ọ bụ isi ọwụwa
5 Aka na ụkwụ oyi nwere ike ịbụ ihe mgbaàmà nke anaemia
Akpụkpọ ahụ na-achagharị agbacha karịa ka ọ dị na mbụ
O doro anya na mgbe ike gwụrụ anyị ma ọ bụ na ọ dịghị amasị anyị ime ihe ọ bụla, nke a pụkwara igosipụta n'ihu anyị. Ya mere, mgbe enwere ihe na-adịghị arụ ọrụ nke ọma n'ime ahụ anyị, ọ ga-apụta. N'ihi ya, na nke a, otu n'ime ihe mgbaàmà nke nwekwara ike ime ka anyị chee na anaemia bụ akpụkpọ ahụ na-egbuke egbuke karịa ka ọ dị na mbụ. Karịsịa, ọ ga-ahụ anya gburugburu anya, ebe ọ bụ na akpụkpọ ahụ na-enwe mmetụta karịa ebe ahụ na ọ ga-akwụsị inwe agba nke mgbe niile. Naanị ile ya anya, ị ga-achọpụta na ihe na-eme. N'ezie, ọ dịghị ihe dị ka nyocha ọbara iji chọpụta.
Ịchọ ice nwere ike ịbụ ihe mgbaàmà nke anaemia
Bịa na-eche banyere ya, ọ bụghị mgbe niile ka a na-agụ agụụ maka ihe ụtọ ma ọ bụ nnu. Ha nwere ike ịbụ ndị dị iche iche, n'ihi na na nke a, ọ dị ka a na-agbaso iwu a. Ọ bụ ezie na ọ bụghị ihe mgbaàmà na-eme mgbe niile, ma a ghaghị iburu n'uche. Ọ bụrụ n'otu oge ọ bụla ọ na-adị gị ka ibili na ngwa nju oyi mana ịga na friza maka ice, ọ bụkwa ihe na-egosi na ihe nwere ike ime na ahụ gị. A maghị ihe kpatara ya, mana ọ metụtara anaemia. N'otu aka ahụ, a na-ekwukwa na agụụ iri unyi bụ ihe ọzọ nwere ike ịpụta. Na-enweghị atụ mana eziokwu!
Ọrịa ụkwụ na-adịghị ezu ike
Ọ bụ eziokwu na ọ bụrụ na anyị echee banyere ọrịa ahụ n'onwe ya, ọ nweghị azịza doro anya maka ihe kpatara o ji pụta. A kwenyere na ọ bụ n'ihi na dopamine adịghị edozi ya, ya mere a pụghị ịchịkwa uru ahụ. Ọ bụ ezie na nke a bụ nsogbu na-emetụta ọtụtụ mmadụ. Ma n'ọnọdụ ahụ ọ dịtụ iche. N'ihi na ọ bụrụ na ị na-adịghị a nsogbu, ma ee na-egosi ma na-ahụ iju sensations na ụkwụ, na mkpali nwere ịkwaga ha, mgbe ahụ anyị nwere ike ikwu na anaemia abatala ná ndụ gị. Nke a bụ n'ihi na ị nweghị ígwè. Mana ọzọ anyị na-ekwusi ike na ọ nweghị ihe dị ka ịgakwuru dọkịta gị maka nyocha.
Mgbagwoju anya ma ọ bụ isi ọwụwa
N'ezie, ọ bụ mmetụta na-adịghị mma, ma tupu anyị echee banyere ọrịa ndị ọzọ, anyị ga-ekwu na ọ pụkwara ịbụ anaemia. E sikwa na ya nweta ya enweghị vitamin dị ka B12 ma ọ bụ vitamin C na ọbụna folic acid. Nke mbụ anyị kpọrọ aha dị mkpa iji nwee usoro ụjọ ahụ ka mma. Ya mere, ọ bụrụ na anyị enweghị ụdị vitamin a, mgbe ahụ, anyị ga-enwe ike ibelata ike itinye uche na ọbụna icheta.
Aka na ụkwụ oyi nwere ike ịbụ ihe mgbaàmà nke anaemia
Ihe mgbaàmà ọzọ nwere ike ime bụ na-enwe aka oyi na ụkwụ mgbe niile. N’ezie, ọ bụghị mgbe nile ka ọ ga-eduga anyị n’ikwu okwu banyere anaemia, ma anyị aghaghị iburu ya n’uche. Ebe ọ bụ na mkpụrụ ndụ ọbara uhie ga-adị ole na ole, ndị a ga-adị mkpa iji rụọ ọrụ ndị dị mkpa n'ime ahụ ma na-eleghara ndị ọzọ a na-ewereghị dị ka ndị dị otú ahụ anya. N'ihi ya, ha agaghị eru aka ma ọ bụ ụkwụ, nke ga-abụ oyi mgbe niile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Ahụike » Ọrịa » Anaemia: mgbaàmà ndị ọzọ ị kwesịrị ịma